Fahasamihafana eo amin'ny OG sy Retro | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny OG sy Retro | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Fiainana / lamaody / kiraro / fahasamihafana eo amin'ny OG sy Retro
Fahasamihafana eo amin'ny OG sy Retro
13 martsa 2013 Narotsak'i Admin
OG sy Retro dia roa amin'ireo maodely maro amin'ny kiraro baskety amidin'i Nike amin'ny fiaraha-miasa amin'i Michael Jordan. MJ, araka ny fiantsoana azy am-pitiavana, dia azo lazaina ho mpilalao basikety lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra ary ny kiraro Jordania dia noforonina sy amidy eo ambany fitarihany. Nampidirina am-pahibemaso tamin'ny besinimaro tamin'ny 1985, ny kiraron'i Jordania dia mijanona ho malaza indrindra taorian'ny maodely sy kiraro ho an'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy amidy eran'izao tontolo izao. Misavoritaka hatrany ny olona amin'ny fisafidianana ny OG sy ny marika Retro. Na eo aza ny kiraro Jordania, misy ny tsy fitoviana eo amin'ny OG sy Retro izay hasongadina amin'ity lahatsoratra ity.
Nike dia namokatra kiraro baskety maro hafa fa ny karazan'olom-bolo sy laza efa azon'ny kiraron'i Jordan dia mitoetra tsy manan-tsahala amin'ny tantaran'ity orinasan-kiraro mitarika an'izao tontolo izao ity. Na eo aza ny fisotroan-dronono MJ tamin'ny 2003, ny kiraro Jordania no mijanona ho kiraro basikety ambony indrindra eto an-tany. Ny Retro Jordans dia ireo kiraro nanaovan'i MJ tamin'ny andro filalaovany na ny Air Jordans mahazatra izay novaina kely mba hahasarika ny olona ankehitriny. Ny orinasa dia manohy mamoaka sy mamerina mandefa kiraro toy izany isan-taona handoa vola amin'ny lovan'ilay mpilalao basikety lehibe. Hatreto dia misy maodely 28 an'ny kiraro Air Jordan avy amin'ny I-XVIII. Ny famoahana indray ireo maodely ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe Retro eny an-tsena. Ny kiraro Retro dia porofon'ny lazan'ny olona sy manintona an'i MJ amin'ireo mpankafy. Na dia mbola mitohy aza ny famolavolana ny kiraro Retro, misy ny fiovana noho ny fandrosoana ara-teknolojia ary koa amin'ny fitaovana ampiasaina. Tena takiana izy ireo ankehitriny, ary nanomboka nitondran'ny olona azy ireo toy ny entana voangona.
Isan-taona dia namerina ny kirarony vitsivitsy teo aloha i Jordanie Company tamin'ny alàlan'ny fanovana kely azy ireo ary famerenana azy ireo ho vola amin'ny lazan'izy ireo. Na izany aza, misy ihany ny maodely sasany amin'ny faritra rehetra izay mbola tsy nosedraina hatramin'izao. Ireo dia antsoina hoe OG na ny tany am-boalohany. Raha ny marina dia misy maodelin'ny Air Jordan izay navoaka imbetsaka mba hanome vola amin'ny lazan'ny maodely.
• Retros no kiraro Air Jordan izay navotsotra indray tamin'ny alàlan'ny fanovana kely ny teknolojia fanaovana kiraro sy kiraro hamoronana modely taloha.
• Ny OG dia midika ho an'ny tany am-boalohany ary midika ireo maodelin'ny kiraro Jordania izay mbola tsy nosedraina hatramin'izao.
• Misy kiraro Jordania amin'ireo maodely marobe izay navotsotra imbetsaka na dia misy aza ny sasany izay mbola tsy naverina notadiavina hatramin'izao. Ireo dia voamarika hoe ny tany am-boalohany na OG.
Fahasamihafana eo amin'ny UGG Ultra Boots sy ny UGG Ultimate Boots Fahasamihafana eo amin'i Uggs sy Emus Fahasamihafana eo amin'ny habe rehetra amin'ny kiraro alika Rocket Fahasamihafana eo amin'ny kiraro avo sy paompy Fahasamihafana eo amin'ny voditongotra sy ny stilettos
Filed Under: Footwear Tagged With: OG , OG Jordans , Kiraro Oroginaly , Retro , Retro Jordans , Kiraro Retro
Fahasamihafana eo amin'ny Blepharitis sy Stye
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge
Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-miory sy ny fangorahana
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Galaxy S3 sy HTC One X
Fahasamihafana eo amin'ny Index Index ny vidin'ny mpanjifa (CPI) sy ny déflatement Gross Domestic Product (GDP)